Ismaamulada Garissa iyo Wajeer oo lagu sheegay inay ka mid yihiin degaanada ay ka dhici karaan xatooyada imtixaanada – The Voice of Northeastern Kenya
Ismaamulada Garissa iyo Wajeer oo lagu sheegay inay ka mid yihiin degaanada ay ka dhici karaan xatooyada imtixaanada
Golaha imtixaanada qaran ee dalka ee magaciisu loo soo gaabiyo KNEC ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan warqado been abuur ah oo la doonayo in lagu khiyaano waalidiinta iyo ardayda isku diyaarinaya imtixaanada qaran ee sannadlaha ah.
KNEC ayaa sheegtay inay jiraan ilaa iyo 6 ka mid ah ismaamulada dalka oo ay maamulayaasha qaar ee dugsiyada ay dejiyeen qorsho ay ku doonayaan inay ardayda ugu fududeyaan qishka ama xatooyada imtixaanada gaar ahaan imtixaanka fasalka afaraad ee dugsiyada sare ee KCSE-da.
Maamul goboleedyadan ayaa kala ah Meru, Kiambu, Garissa, galbeedka Pokot, Kisii iyo Wajeer.
Guddoomiyaha golaha imtixaanada qaran Prof. George Magoha ayaa intaasi ku daray in sido kale baaritaano lagu sameynayo qeybo ka mid ah gobolkii hore ee Nyanza.
Prof. Magoha oo tusaale u soo qaatay arrin uu sheegay inay ka jirto Garissa ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa
Sido kale sarkaalkan ayaa carrabka ku dhuftay in magacyada maamulayaasha la tuhunsanyahay lagu wareejiyay laamaha ammaanka si ay tallaabada habboon u qaadaan.
Prof. Magoha ayaa sido kale sheegay inay jiraan xarumo waxbarasho oo lagu qabanaya ducooyin iyo howlo kale oo la doonayo in niyadda loogu dhiso ardayda in kastoo wasaaradda tacliinta ay horay u shaacisay inaan arrimahaasi la sameyn karin xili dugsiyeedka saddexaad ee sannadka.
Guddoomiyaha KNEC ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan maamulayaal ardayda ka qaadaya lacago ay sheegayaan inay u adeegsanayaan in looga caawiyo dhanka imtixaanada.
Xoghayaha wasaaradda waxbarashada ee dalka Dr. Belio Kipsang ayaa sheegay inay wada shaqeyn dhow kala dhexeyn doonto wasaaradda arrimaha gudaha si loo sugo amniga xarumaha imtixaanada lagu qabanaya.
Sido kale waxaa uu carrabka ku dhuftay in tallaabo laga qaadayo cid waliba oo isku dayda inay sameyso ama fududeyso xatooyada imtixaanada.
Dr. Kipsang ayaa sido kale sheegay in si weyn loo sugi doono ammaanka degaanada ay dhawaan saameyeen iskudhacyada ama falalka amni darrada oo ay ka mid tahay ismaamulka Narok.
Sido kale xoghayaha ayaa shaaciyay in natiijada imtixaanada fasalka afaraad ee dugsiyada sare la soo bandhigi doono ka hor 25-ka bisha Disembar ama laba iyo tobnaad ee sannadkan.
Sannadkii hore waxaa waxba kama jiraan laga soo qaaday natiijadii 1,205 arday ah oo u fariistay imtixaanka KCSE-da kadib markii la ogaaday inay sameyeen falal aanan habboonayn.
← Madaxweynaha dalka oo la kulmay ganacsatada Canada
Dowladda soomaaliya oo shaacisay lacagaha lagu leeyahay →